Nhau dzeCommunity - Kune Vaverengi Vane Izwi
Iva Anopa Mupiro
KO VAVERENGI VANE VOICE
Imbwa dzeDow - 2019
Amazon Consumer Kubiridzira
Kurwadziwa Kununura - Kuverenga Kirimu, Gel & Spray
CN Musika Wotsvaga
Nyika dzepasi rese
Chinyorwa Kuendesa Kutungamira
CN Yakatibatsira Kuwedzera Mitero ne 50%
Mushure meKuedza Noverengeka PR Services Ini ndakawana CN
Tora Kubhadharwa Kuti Uzivisa Nhau!
Tumira Artilces - Shandura
Añez Anosimudza Musarudzo weBolivian, Anozivisa Mhanya nezveHutungamiri
Vincent Ferdinand January 25, 2020 January 25, 2020 Vincent Ferdinand
Mutungamiri wepamberi weBolivia, VaJeanine Añez, vazivisa kumirira mutungamiri wenyika neChishanu, mune danho rakaita kuti rishorwe kubva kupikisheni yenyika. Sarudzo dzemutungamiri wenyika muBolivia dzakarongwa muna Chivabvu 3. "Izvo zvaisava muhurongwa hwangu," akadaro Añez pachiitiko muLa Paz pakaumbirwa mubatanidzwa wake, Pamwechete.
Erdogan Anokumbira Kuwedzera Dzvinyiriro paLibtar Haftar
Mutungamiri weTurkey, Recep Tayyip Erdogan, akurudzira dzvinyiriro yepasi rose kumauto ekumabvazuva kweLibya kuti vatambire gungano, uye vakati Turkey inoramba yakazvipira kutsigira hurumende yeLibya inozivikanwa neUN. Erdogan akataura izvi mushure memusangano muIstanbul pamwe neChancellor weGerman, Angela Merkel, uyo svondo rapfuura akaita rugare ...
Ziviso! Ko China Nyowani Coronavirus Leak Kubva Kune yavo Biological Hondo Zvombo?
Editor's Pick Christina Kitova January 26, 2020 January 26, 2020 Christina Kitova
Parizvino, nyika iri kutarisa nhau nezveutachiona hutsva kubva kuChina, Maererano neWorld Health Organisation yakanzi 2019-nCoV. ihwo hutachiona hwekufema chirwere chinokonzerwa nekoronavirus isina kuwanikwa muvanhu kare. 2019-nCoV haisi imwechete coronavirus iyo yakakonzera Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) mu ...
Olê, Olê Mister - Nyaya yaJorge Jesu naFlamengos
Editor's Pick Miguel Torneire January 26, 2020 January 26, 2020 Miguel Torneire
Mukuru wechiPutukezi airatidza shungu isina magumo yekushanda uye kuhwina mumwedzi mitanhatu pfupi, pfungwa dzakaomarara, uye kumutsa hofori yekurara yebhola yeBrazil. Bvunza chero weBrazil kuti anofungei nezveSoka, uye mhinduro yake ichakuudza manzwiro anoita nyika nezvemutambo uyu. Nhabvu chikamu chakakosha che ...
Maketi Tsvagudzo uye Nhau
Yakakwira-Performance Computing (HPC) senge Soko rebasa
Pet Chikafu Zvirongedzo Musika Ununura maNutrients
Internet yezvinhu (IoT) muhutano Hutano Hunovandudza Kukurukurirana
Mutengesi Management Systems Musika Inotakurwa
Musika weAge Augmentation Unosimudza Ruoko
Yakabatanidzwa Retail Musika Inovandudza Basa
Smart Kuvaka Musika Kuita Akapusa Maguta
Methanol Musika muKuda
Wemvura Cheka Vanotarisa Musika Unowana Zvakawanda Kunze Kweoiri Tsime
Shedding Chiedza pane Thin Firimu Solar Cell Market
Chete $ 1 / panya
Tumira Ad wako Pano
African Union Kukurukura nezve Libyan Dambudziko
Guta reCongo, Brazzaville, ichaita musangano we mini-Africa pagakava reLibya muna Ndira 30, musangano we AU usati warongwa muna Kukadzi 9th. Inouya panguva iyo guta guru reLibya riri kupupurira…
OPEC Kufunga Nezvekucheka Mberi kweMusangano waMarch
OPEC iri kufunga nezvekuwedzera maburi ayo ekugadzira mafuta kusvika pakupera kwegore, sezvo misika ichiri kutarisa zasi, asi nhaurirano dzinoramba dziri padanho repamberi. Sangano reRussia TASS renhau rakataura chinyorwa…
New Tunisian PM Kunze Vanoshora Vanopikisa kubva kuHurumende
Mutungamiri weTunisia akasarudzika Elyes Fakhfakh panguva yemusangano wevatori venhau nezuro kuti vachashanda kuumba mini-Kabinet uye nekubatana hurumende inounza mapato anotsigira Mutungamiri Kais Saied mumutambo wechipiri…
Houthi Mauto Anorasikirwa Anowedzera mu al-Dhalea
Kurasikirwa kwevarwi veHouthi kwakawedzeredzwa mukutarisana pamwe nemauto akabatanidzwa mu al-Dhale gavhuna, nepo National Army yakasimbisa kuti kurwira kusunungura Sanaa yaive sarudzo isingadzoreke. Masoja euto akati kune vatori venhau…
France Inosimbisa Kutanga Coronavirus Nyaya
Sangano reFrance Ministry of Health rakasimbisa zviitiko zvitatu zvevanhu vatapukirwa neCoronavirus Chishanu chakaburitsa kubuda kwechirwere chisinganzwisisike chekuputika mudunhu reChina Hubei. Gurukota rehutano reFrance, Agnes Buzyn, akayambira kuti, mu…
UN Inoshevedza kuNew Rebhanoni DzeMuchadenga kuenda kuKupwanya Hutsotsi
United Nations Special Coordinator weRebhanoni, Jan Kubis, akazivisa kuti aiona Prime Minister-akasarudzika kusarudzika kwaSajard Mdhara mukushanda mukugadzirisa shanduko pamwe nekurwisa huwori. Mushure memusangano nezuro, United Nations yakasimbisa…
Zviuru zvinoratidzira muIraq Kupesana neAmerica Troops
Zviuru zvevanhu zvakadavidza kudanidzirwa kwakaitwa naShiite mufundisi Muqtada al-Sadr kuratidzira neChishanu vachipesana nekuvapo kwemauto eUnited States paivhu reIraq. Mutauri akaverenga chirevo chaAal-Sadr panguva yekuratidzira, maakadana ...
Coronavirus Rufu Toll Inosvika makumi maviri neshanu muChina
Chinese state TV network CGTN yakasimbisa neChishanu mangwanani kuti kufa kwevanhu nekuda kweiyo coronavirus nyowani munyika yakakwira kusvika 26. Izvi zviri kuwedzera kuvimbiswa kwe 881 nyaya dzevanhu…
Sudan Saina chibvumirano neVapanduki, Dambudziko Rinoenderera muKhartoum
Hurumende yeSudan pamwe neboka guru revapanduki vakasaina chibvumirano chekutanga neChishanu, pazvirongwa zvezvematongerwo enyika nezvekuchengetedzeka, zvichimisikidza nzira yechibvumirano chakazara cheyananiso kuburikidza nehurukuro dzinoenderera pakati pemativi maviri aya. The Sudanese…
Vanoenderera Mberi muFrance, Kabinari Inopfuudza Inopokana Pension Reform
NeChishanu, dare remakurukota reFrance rakakurukura uye rakapfuura chirongwa chekupokana pension chirongwa chakatemerwa Mutungamiri Emmanuel Macron. Vanopikisa shanduko vakasarudza zuva iri kuronga ratidziro uye kuratidzira. Musoro weMukuru ...
Coronavirus: China Inotsanya Mamiriyoni makumi maviri Vanhu, Kanzura Spring Mutambo Mhemberero
Kupararira kweCoronavirus itsva kwave kubuda musimba muChina nenyaya dzinosvika makumi mashanu neshanu uye makumi maviri nenomwe vakafa. Mamwe maguta ane vanhu vanopfuura mamirioni makumi maviri vakasarudzika, kusanganisira Wuhan, Huanggang,…
BREAKING: China Inorwa Wuhan Coronavirus Kupesana nekuuya kweChinese Nyowani
Editor's PickCorey Barro
Zvingangoita mwedzi mumwe chete kubva pakatanga kubuda, iyo itsva Wuhan coronavirus yakambokonzeresa varwere 644 vane hutachiona, makumi mana nemapfumbamwe nemakumi mashanu nenyaya dzekufungidzira, uye gumi nemasere vakafa kuChina. Nekudaro, nekusvika kweChinese Year Year uye…
Griffiths muSaraa Kusangana NaHouthis
Martin Griffiths, UN Special Mumiriri kuYemen, vasvika nhasi ku Sana'a kuti vataure nezvekumisa kufambiswa kwemauto nenzira dzekuita musangano weYemeni wezvematongerwo enyika. Nhau kunobva Sanaa International Airport…
Yakazara Yenyika Dzese Yekuyeuka Zuva Remubvunzo
Mutungamiri weRussia, Vladimir Putin, akauya neChina kuzopemberera Zuva Rinoyeuchidza Zuva, uye akagara padivi peMutungamiri weIsrael, VaBenjamin Netanyahu. Izvi zvisati zvaitika, akasangana naamai vaNaama Isachar, mukadzi akasungwa muRussia…
UN Nyanzvi dzinoshevedza Kuongorora muBezos Cell phone Kubheja
Nyanzvi dzeUN neChitatu dzakadaidzira kuti dziongororwe mukubiwa uye kuteedzera ruzivo rwekuvanzika uye rwekuvanzika kubva mufoni yemuvambi weAmazon nemutungamiri wenyika, VaJeff Bezos. Foni yacho inonzi yakabhuroka…
Iran Inotyisidzira Kubvisa Kubva kuNyukireya Isiri Proliferation Chibvumirano
Gurukota rinowona nezvekunze kweIran, Mohammad Javad Zarif, akataura kuti nyika yake ichabva Chibvumirano cheKusapfuurika kweNuclear Weapons (NPT) kana veEuropean vakaparura chibvumirano cheIran Nuclear Deal ...
Democrats Present Pakutanga Kupokana muTrump Impeachment Yakaedzwa
NeChitatu, maDemocrat akatanga kupa humbowo hwavo kwekutanga mudare reSenate raDonald Trump, zuva rakapera musangano wekuzeya mitemo yekugadzirisa. MaRepublican ndiwo mazhinji mu…
New Russian Hurumende Kugadzwa ari Farce - Chii Chitsva?
Izvo zvitsva, kwete zvitsva zvakadaro, kugadzwa kwehurumende yeRussia kwakaziviswa. Mutauriri weRussia, Vladimir Putin, akataura zvichitevera kusiya chigaro kweMutungamiri weRussia, Dimitry Medvedev, pamwe necabinet. Putin anoshuvira kugadzirisa…
Russia Kuronga Kugadzira Imwe Nzira yeGitHub - Kwakanaka Russia kubva kuMusika wePasi rose
Russia iri kuronga kugadzira imwe yayo kuMicrosoft inomiririra GitHub, kambani yepasirese iyo inopa inobata nekusimudzirwa kwesoftware, shanduro control uchishandisa Git. Microsoft yakawana kambani iyi muna 2018 pamadhora mazana manomwe nemashanu emadhora.
Facebook Inodzivirira Zvematongerwo enyika Campaigns Kushambadzira Policy
Editor's PickSamuel Gush. W
Zvakave zvichiratidzwa kuti kusanzwisisika pamasocial media network kwakabatsira zvakanyanya pasarudzo dzemutungamiri wenyika yeU.S 2016. Mamwe masocial network akapindura nekurambidza kushambadzira kwematongerwo enyika kungangoita zvisiri izvo. Facebook yaita, zvakadaro, yachinja yayo…
Seneti yeUS Inomisa VaTrump Impeachment Mitemo Yekuedza
Dare reUnited States kutanga kweChitatu mangwanani, mushure memaawa gumi nemaviri ekuitirana nharo, rakaisa mutemo wekutongwa kwemhosva kweMutungamiriri weAmerica, VaDonald Trump. Ruzhinji rweRepublican rwakaramba kuedza kwese kwakaitwa nemaDhemocrats kudaidza hutsva ...
Iran Inosimbisa Plane yeUkraine Yakadzika pasi Nematombo maviri
Iwo mauto eIran akapfura pasi vafambi vekuUkraine vhezheni PS752 vachishandisa maviri-kune-mweya makomba mushure meku kukanganisa iko kune ndege yevavengi. Izvi zvinoenderana neshoko repiri rakaburitswa neCivil Anga Organisation yeIran. Izvo…
Wuhan Coronavirus Rekodhi muWashington State
Mumwe munhu ari mudunhu reUSA reWashington ndiye wekutanga munyika kubvunzwa chirwere ichi chisinganzwisisike. Mhosva iyi yakatanga kuwanikwa muguta reWuhan, China, mune mazana evanhu ...
BHUKU! Russia Zvisiri Kuvaka Zvivakwa kuJam Satellite Signals
Editor's PickChristina Kitova
Roscosmos yakawana nzira yekuvanza yakarongedzwa zviitiko mukati meRussia nekudzivirira vekunze satellite satellite kuwana ruzivo mukati medunhu. Uyezve, vatsva veRoscosmos vakagadzira hurongwa hwekuhwanda zviitiko muRussia kubva ku…
VaTrump, Thunberg Clash muDavos pamusoro peMamiriro ekunze
Musangano wepasi rose weWorld Economic Forum wakatanga neChipiri muDavos, Switzerland, ichitungamirwa nenhaurirano panhau dzinechekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze. Kwegore rechipiri mumutsara, mudiki weSweden mutsigiri Greta Thunberg aive…
Israel Roundup: Kusavhara kweNetanyahu, iko Kuregererwa kweYissachar
Nhaurirano dzichatanga svondo rinouya muKnesset pamusoro pekuti vangape Prime Minister Benjamin Netanyahu dziviriro kubva pakupomedzerwa. Netanyahu akatongerwa mhosva yekunyepa, chiokomuhomwe uye kutyora kuvimba, kwaanonzwa kuti hakuna kunyanyisa…
Iran Inosimbisa Kuti Yakapotsa Makombiyuta kuPS752
Iran yakasimbisa neChipiri kuti yakapfura zvombo zviviri musi wa8 Ndira kuUkraine International Airlines yendege 752, chikanganiso chakaipisisa chakakonzera kufa kwevanhu gumi nemazana manomwe nenomwe vaive muchikepe. As per the…
Eureka! Pfungwa Pangangove Pane Zvimwe Zvikamu Mukati Meatomu
Idzva basa rakaziviswa zvine chekuita nezvefizikisi pasi pekubatana neveRussia uye veGerman fizikiki, zvine chekuita nemaitiro emagetsi kumaatomu ane ma isotopes akasiyana echinhu chimwe chete. Ma elekitori haana kushaiwa mhosva zvidimbu…
Yenyika Yekutanga Kutyaira Ziso Kamera Inokutendera kuti Uone Chaizvoizvo Race Mota Mutyairi anoona
Parizvino, mota dzekumhanya dzakarongedzerwa nezviuru zvemakadhi e-Bhodhi izvo zvinobvumidza kuratidzira mifananidzo kubva kune yakawanda pembe mukati meiyo nhepfenyuro. Izvo chete ikozvino vateveri vanogona pakupedzisira kuona ...
Nei Dhijitari Yekutengesa Yakakosha Kumabhizimusi Madiki
Editor's PickAustin W
Kushambadzira kwedhijitari kunopa varidzi vemabhizinesi madiki maturusi avanoda kusimudzira zvigadzirwa zvavo kune vavanotarisana navo. Masangano anokwanisa kuwana zvishandiso zvemutengo wakaderera pavanoshandisa zvigadzirwa zvekushambadzira zvemadhijitari kubata izvozvi uye…
Iyi nzira itsva yeRussia neConstitution Amendment? Kana Yakanga Ingori Inguva Yemusi Putin?
Izvo zvinogadziriswa kubumbiro reRussia zvinopa tariro kune vanopikisa uye chii chiri ramangwana reRussia nehurumende? Muchokwadi, Russia haina kupikiswa. Mutungamiriri anopikisa mutungamiri Alexei Navalny…
Kusiyana Pakati peVisa 189 neVisa 190
Iyo ine vhiza yakazvimiririra vhiza subclass 189 inozivikanwa seinongedzo-based visa. Visa iyi ndeyevanhu vasina kugadzwa chero mushandi, nhengo yemhuri, ndima kana dunhu. Mukana wakanyanya weizvi…
Nyowani CIA Yakaziviswa Zvinyorwa Zvinofumura Nazi Hondo dzeVapambi - Ukraine's Stepan Bandera iri paRondedzero
Iyo CIA yakaparadzira zvinyorwa pasi pemutemo izvo zvinoda kufumurwa kwevakapara mhosva dzehondo yeNazi. Central Intelligence Agency basa rekunze revashandi vehurumende veUnited States, rakapihwa…
Israel muCentre of the World yeInternational Holocaust Yekurangarira Zuva
Editor's PickDavid Wexelman
Israel svondo rino iri pakati penyika sezvo iri kugamuchira vaenzi kubva kumarudzi epasi rose kuti vabatane pamwe chete paInternational Holocaust Yekurangarira Zuva. Kurangarirwa kwemamiriyoni matanhatu maJuda ...
Imbwa dzeEurope: Imwe yeMhando Inowana Mhinduro
Editor's PickImbwa dzeEurope
Isu tinofara kuunza iyo yazvino yekuwedzera kuDurig portfolio yemari mhinduro, iyo Imbwa dzeEurope. Yakagadzirirwa kutora yepamusoro mhando inogovaniswa yeEuropean Blue Chips pamwe nekukwanisa kukura mari ...
7 Epamusoro E-Commerce Zvishandiso Zvinobatsira Kutendeutsa vashanyi kuva Vatengi
Editor's PickAdesan john
Kana yako webhusaiti iri kunetseka ichiwana traffic yakakura, asi huwandu hwevanhu vanoshandura kune vatengi hunoramba huri hudiki, unogona kutora rubatsiro kubva kune akasiyana eE-Commerce zvishandiso. Ino ndiyo nguva yekuti uvhare mese
Yakanakisa Nguva Yekuhaya Imba mu 2020
Ndeipi nguva chaiyo yekubatira imba? Zviri munguva yechando kana munguva yezhizha? Zvakajairika kusvetukira kufunga zano kuti chando chichava chinonyanya kudhura…
Ziva Kukodzera Kwako KwePR muAustralia seVisa Subclass 189 Inonyorera
Unyanzvi Yakazvimirira Subclass 189 inoonekwa seyakanongedza-vhiza vhiza uye vhiza iyi ndeyemushandi asina kugadzwa nedunhu rega rega kana nyika, yemhuri kana mushandi. Visa iyi inobvumidza iwe…
Russia Inogara Yakundikana Ne Ndege Zvinotakura - Ko Ramangwana Richava Rakasiyana Pasi paPutin?
Nhoroondo, Russia yakanga isiri yakasimba nezvehondo dzegungwa. Kutora muenzaniso weHondo yeTsushima muna 1905. Iyo inozivikanwa zvakare seHondo yeTsushima Strait uye Naval Hondo ye…
KoBlockchain iri Shanduko yeMedia neVaraidzo?
Blockchain mune midhiya uye varaidzo? Mirira, yakanga isingabatanidzwe neye cryptocurrencies yakadai bitcoin? Hongu, asi ine zvakawanda zvinogoneka kupfuura zvatinotenda. Mune venhau uye varaidzo indasitiri, inogona kubatsira kwete…
Yakavandudzwa Mutero Inobata Estimator Inobatsira Vashandi Target iyo Mari Yavanoda - Inoratidza Maitiro Ekuzadza Idzva 2020 W-4
Iyo Yemukati Revenue Service yaburitsa idzva uye yakagadziriswa Mutero Inobata Estimator, yakagadzirirwa kubatsira vashandi kunongedza kudzorera kwavanoda nekuita iyo chaiyo huwandu hwemutero wemubatanidzwa unobvisirwa mari yavo ...
Nhau dzeCommunity dzinosvika kune Chikonzero: Zvinopfuura zviuru zvishanu!
Editor's PickFreelance Global Gigs
Komisheni Nhau dzichangoburitsa chinyorwa chayo zviuru zvishanu, ichipenga chinoshamisa cheuwandu hweanobatsira uye kukura kwevaverengi. Iine vanopfuura chiuru vabatsiri vakasainirwa kusvika pari zvino, nzvimbo yacho zvakare yave nevanopfuura zviuru makumi maviri vashanyi akasiyana uye…
Nei Uchifanira Kubhadhara Vashandi Mari Inokwikwidza Mari?
Iyo paramita yekubvuma kupihwa kwebasa inogona kunge iri subjential asi pane chinhu chimwe icho vanotsvaga basa vanogara vachichengeta tabu pa- Remuneration. Kunyatso kupenya kuburikidza neye post / ad, maziso etariro zvakananga…
Transphobic Radio Host Inoramba Anorwisa paGender Dysphoria
Mukuputika kumashure kuchinyorwa chandakanyora, Mr. Pratt akabata imwe podcast yakanzi "HD83: Democrat inotora mhosva yekushoropodzwa isina kubhadharwa." Kutanga, anoti ini handina kubatwa nekuda kwepodcast yapfuura ...
Nzira yeku Tora Unyanzvi Yakazvimirira Visa Subclass 189
Kana Australia iri nyika yako yemaroto uye iwe uchida kugara uye kugara muAustralia saka nyanzvi yeVisa yeVisa subclass 189 ndiyo yakanakira sarudzo kwauri. Visa iyi inokutendera kuti ugare mu…
Tenda Mwari nekupa Hutano
Vanhu vanoregedza chipo chehupenyu. Mangwanani kana iwe unomuka iwe unofanirwa kurumbidza Mwari nekukupa imwe zuva. Tsika yechiJuda ndeyekuropafadza Mwari nekuda kwehutano mushure mekupinda ...
Kutanga nerwendo rwekuva Mutungamiriri weKoreji
Mutungamiriri wekoreji ndiye mutungamiri wekoreji kana yunivhesiti. Nyanzvi inokwanisa kushandura masangano ane hunyanzvi hunyanzvi uye kugona, kugadzirisa dambudziko uye kugadzirisa iyo nyowani nyowani yekudzidzira mudzidzi anokudzwa…
Greshun De Bouse: Kuenzana Kune Vese Vanoitisa America Great
Zvakanaka. Saka isu tese tinoziva Greshun De Bouse ndiye Mambokadzi weZvese Zvinoshamisa! Kukunda kwake kunyemwerera uye hukuru pane hupenyu hwakanaka mweya unotapukira! Chikamu cheizvo nakes her zvikuru kuzvipira kwake…
Muna 2020, Tanga Basa Rako Neakakurumbira Kupfupisa Makosi eAustralia
Iko hakuna muganho wekudzidza iwe uchiri mudiki uye mukoreji. Iyo khosi yakawedzera, yakagadziriswa uye zvinoenderana nenguva dzazvino. Dzidzo haisi yekungoda kudzidza mamwe ehunyanzvi hwekutaura asi ayo…
Hondo Pakati Pakati peChengetedzwa uye Liberal Pfungwa muNyika
Kufambira mberi kwekusununguka kwakashata kuri kubata maMosiremu echiMuslim, maKristu, maHindu nemaJuda pasi rese. Mune nhau mune chinyorwa chinotaura nezvekereke yeKatorike Papa Benedict anoyambira pamusoro pekuzorora mitemo yehupirisita. Papa Benedict vakasiya basa…
PaInternet HR Courses Inobatsira Kuita Basa Rako Nepamusoro
Kuenderera mberi nekudzidza kwakakosha kutsvaga mutsva mikana uye kusimudzira mudanho rebasa. Izvo zvakakosha kuti udzidze hunyanzvi hutsva, kugara uchimhanyisa nemaitiro zvazvino, kuvandudza hutungamiri, uye nezvimwe. Kuenderera mberi nedzidzo ye…
DHX Media / Wildbrain Zvisungo, Nguva Pfupi, Yakakwirira Mafuta, Yakagadziriswa Income Investment, Inoregedza Kupfuura 9.5% YTM
Editor's PickDurig's FX2
Vhiki rino, vhiki yeDurig yekusungirwa kwebhondi inotora kumwe kutarisa kukambani yeCanada iyo inotarisa pane zvevana uye mhando. Iwe unogona kunge usina kunge wakambonzwa nezveWildBrain (yaimbova DHX Media), asi unogona kunge uchiziva zvimwe…
Greshun De Bouse Kune Vanodzvinyirira: 'Ndokumbirawo Mira Kunditambudza'
Mutungamiriri wedu anodiwa wepasi rese Greshun De Bouse ane hupenyu hwakawanda uye hwakawanda hwekuita! Tinomuda nekuda kweizvozvo! Mumamiriro ezvinhu akajairika, anowanikwa achitsvaga, achienda nekumbosangana kusangana nevanokudzwa / vanyowani, kazhinji vanoita…
CN Yakabudiswa muinopfuura 100 World Languages
Endesa Aricles Pano uye wobva Kubudiswa Pasi Pose
Tsvaga Yemunhau Nhau
CN Yakanyanya Kuverenga 1 Vhiki
KUSVIRA NYAYA: Alleged Chekutanga Chinese Chirongwa Kuronga Mutauro Kunoratidza Kuva Python Yakavakirwa
Anti-Drone Musika Inowedzera
Mibvunzo Inotyisa Paunenge uchiongorora E-commerce yako Mapuratifomu
Volkswagen Inosundira Gumi Nechinomwe-Mufananidzo Sum Kuti Unganidze Vapoteri
Kubatanidzwa kweShumiro Uye Musika Wekutarisira Kwakabatana neDhijitari Shanduko
Iranian Club kuenda kuHowcott AFC Champions League
YAKO YAKAIPA, YAKO YAKAIPA: Vaka yako Yako Enterprise Cloud Neinodzidzisa Yake Cloud Solutions
Microjob - Freelance Global Gigs Yakaderera Mutengo Musika
3 Global Press Regedzera / Zviuru zveMonero
Global Press Regedzera Kunyora / Kushambadzira
Giredhi AAA Chirungu Mutauro Kugadziridza Service ($ 45 pamashoko chiuru)
Simbisa Bhizinesi Rako - 3 Zvinyorwa mu100 Mitauro yemadhora 149
3 (21) Advisor Investment Advisor - Fiduciary Services - Flat Fee yemadhora 50 / Awa yeKubvunza
Chinyorwa Chakanaka, Chakanyorwa-Zvakanaka Chinotsigira Bhizinesi Rako
Professional Fiduciary Services - $ 100 yeawa 2
Shandura 3 Press Inoburitsa Kwemavhiki e2 emadhora e21
Shambadza 2 Press Regedzera ye $ 16 - Yakanakisa PR Deal paInternet?
Shamba Kuburitsa Kwako Rinoburitswa paGoogle & Nhau dzeCommunity for Just $ 11!
Iwe unofanirwa kuve Nyoresa se CN Contibutor kana Munyoreri kuKupindura
Brendan Monaghan (CN Staff) on Olê, Olê Mister - Nyaya yaJorge Jesu naFlamengos
Christina Kitova on Nhau dzeCommunity dzinosvika kune Chikonzero: Zvinopfuura zviuru zvishanu!
Christina Kitova on BREAKING: China Inorwa Wuhan Coronavirus Kupesana nekuuya kweChinese Nyowani
Jared Baxter on Musika weAge Augmentation Unosimudza Ruoko
MW on BREAKING: China Inorwa Wuhan Coronavirus Kupesana nekuuya kweChinese Nyowani
MW on Rheinmetall - Champion yeGerman Inotarisana Nekukanganisika MuDziviriro Nyika
Rocco Lewis on New Technology Kutyaira Dhijitari Mafuta Musika
Gordon Fiddes on Stampede paSoleimani Funeral Inouraya makumi mashanu, Ekuvadza 50
CN Mharidzo yeKutora
CN Zvematongerwo enyika
CN Sumit Zvinyorwa - Zivisa
FGG Freelance Global Gig Musika
CN Terms & Mamiriro
CN Iva Munyori
CN Iva Anopa
FGG Kunyoresa se Freelance Gig Anopa
FGG Tumira Guru
FGG Freelance Zvinyorwa zveVatanga
FGG Spanish Spanish Freelance Gigs News
FGG Russian Shanduro Freelance Gigs News
FGG Portugueses Dudziro Freelance Gigs News
FGG French Shanduro Freelance Gigs News
CN Yakagadziriswa Inowana
CN Pain Rubatsiro - Kuverenga Cream, Gel & Spray